Sony သည်အိန္ဒိယတွင် Premium Camera ပါသော Mid-Range Xperia XA1 ကိုမိတ်ဆက် Androidsis ပါ
Sony သည် Xperia XA1 အလယ်အလတ်တန်းစားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ပရီမီယံကင်မရာဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
လူကြိုက်များသောထုတ်လုပ်သူ Sony ကအသစ်ပြုပြင်ထားသောအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းကိုကြေညာခဲ့သည် အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာပါသည့် Xperia XA1 အိန္ဒိယမှာ။ ဒီစမတ်ဖုန်း, မော်ဒယ်နှင့်အတူ Sony Xperia XA1 က Ultraနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလိုဘာစီလိုနာတွင်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျင်းပခဲ့သော Mobile World Congress 2017 ၏အခမ်းအနားတွင်ကမ္ဘာသို့တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
Sony Xperia XA1 သည်ထိပ်တန်းနှင့်အောက်ဘက်ရှိစိန်ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူ 720p မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကိုပေးသည်။ သို့သော် ဒီစမတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေထူးခြားသလဲ ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်၏ဖွဲ့စည်းမှု သင့်ရဲ့ပရီမီယံကင်မရာ.
Sony Xperia XA1 နှင့်ရှေ့ကင်မရာပါ ၀ င်သည်
Sony Xperia XA1 ကa23 MP နောက်ဘက်ကင်မရာ အရမ်းကောင်းတယ် 1 / 2,3″ အာရုံခံကိရိယာ မင်းတုန်းမင်း RS ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး autofocus (၀.၀၃ စက္ကန့်)၊ ၅x Clear Zoom၊ 0.03K ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ISO အတွက်ရုပ်ပုံများအတွက်5နှင့်ဗီဒီယိုများအတွက် iSO4၊ Steady Shot features ။
ရှေ့ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍၊ 8MP ထိုသို့တစ်ဦးရှိပါတယ် 23mm အကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူး.
Xperia XA1 တွင်aUSB Type-C connector ကလိုက်ပါသွားသည် အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း အသုံးပြုသူသည်မိနစ်အနည်းငယ်မျှအားသွင်းရုံဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာဘက်ထရီသက်တမ်းကိုခံစားနိုင်သည်။
အိန္ဒိယသည်လူ ဦး ရေကြီးမားသောအလားအလာရှိသောကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုအထူးအာရုံစိုက်သည့်ပေါ်ထွက်လာသည့်စျေးကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းများဖြင့်ကျော်ဖြတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Sony သည်ထိုအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံလိုပါ။ ၎င်းတွင် Xperia XA1 ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည် သုံးအရောင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် (အဖြူ၊ အနက်နှင့်ပန်းရောင်), ၁၉,၉၉၀ ခန့်ရှိပြီး၊ 310 ဒေါ်လာ.
ဒီစမတ်ဖုန်းအကြောင်းပိုသိချင်ရင်ဒီကိုဖတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Sony Xperia XA1 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Alfonso de Frutos မှပြုလုပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Sony က » Sony သည် Xperia XA1 အလယ်အလတ်တန်းစားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ပရီမီယံကင်မရာဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အလယ်အလတ်တန်းစား Dual Camera UMIDIGI Z PRO ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ